Phambi looking for umsebenzi, enye into wonke umntu iqwalasela ngokubanzi na imali okanye umvuzo. Ewe, umonde koko kukhokelela kwimpumelelo kodwa ekupheleni kosuku, xa ubuyela udiniwe ekhaya, kwento oyifunayo intuthuzelo iziyolo. ke, kusoloko kungcono ukubeka usukelo lwakho ubude omkhulu apho unako ukufikelela zonke izinto wentuthuzelo kunokuba ekubekeni usukelo olulula. Kukho imisebenzi ezithile eziza a lot of kwimboni kunye yomvuzo. Following is a list of some of the top career options that would support you efficiently both financially and prestige wise.
Kwizizukulwana zoshishino yangoku, igama eliphezulu sele Yakheka abantu lokuphatha ezininzi izakhono. Asinto luhambo elithozamisayo kakhulu kwinqanaba yamangenelo. kunjalo, xa step up ukuthatha uxanduva aphezulu kunye neenkqubo izigqibo, imivuzo yakho iyanda. Konke ufuna nje isidanga ubugosa lweziko eyaziwa kakuhle. Oku yindlela CEO ngoku ukufumana imali ninzi. Iinkampani bayaqhubeka ukuba ikunike kwimboni ezahlukeneyo kunye ngomvuzo wakho.
Oogqirha kufuneka kuzo zonke iintlobo iimeko zonxunguphalo nobuchule babo enexabiso eliphezulu eluntwini. Wakuba sowukuchana Medicine, ungase uhambe phambili ukuqala iklinikhi yakho yabucala eyakho apho intlawulo yokubonana nogqirha ukuba uza ukuya kufikelela kwisixa esikhulu. Ukuba ugqirha akuthethi ukulanda kuphela imali kodwa kukuvuza a lot of elihle eluntwini. iingcali zempilo zeendidi ezahlukeneyo, njengokuba, bamazinyo, ophthalmologists etc.
IT ichuma okwangoku. Ngobugcisa Ukubuyisela wonke umsebenzi manual, izisombululo IT zifunwa enkulu. Kukho kakhulu ukuxhomekeka software yekhompyutha ngokusekelwe izicelo kule mihla. ke, kukho eninzi ithuba lokufumana isixa semali.
Chartered zocwangciso-mali kwaye CFAs
Mali kuyinto ebalulekileyo kuzo zonke eqinile. Uhlawulwa kangangoko njengoko sifuna njengoko yenye yeemfuno ebalulekileyo kumbutho. Ukugcina iincwadi wabo, uphicotho kufuneka yaye inxalenye enkulu yenkqubo yokucwangcisa ucwangciso zemali zonyaka. Ngenxa yoko, CA kunye CFAs ube umda omkhulu shishino.
nezahlulo Business uphawu kwiindawo ezahlukeneyo, leyo kutheni kukho imfuneko yokuba zombini oosomashishini kunye nabantu eqhelekileyo ukubhabha kaninzi. Bakulungele ukuba sichithe imali elikhulu moya. Icandelo moya ichuma ngesantya ayikholeleki. ke, pilot, abalindi flight, abasebenzi komhlaba, hostesses umoya etc zifunwa.
Amatyala amaninzi kangaka kusalindwe, abameli kwakhona zifunwa kakhulu. Umyalelo intsimi apho xa ukhetha indlela ekunene kunamathela kwimilinganiselo yakho, ojika abarhola zombini nobutyebi nokwaneliseka. Kukho amaxesha xa sinokulahlekiswa. Ukuba ukujongana kunzima. kunjalo, kokuba anikwe imbeko, iinzuzo kunye nemali ekupheleni kosuku.
Imidlalo ayikho ikomityi yeti ukuba wonke. Kodwa ukuba unesiphiwo kwaye bafumane izakhono ezemidlalo elungileyo ukususela ebuntwaneni bakho, kufuneka nje ukuba ungubani kuba wena entsimini. Asiyonto umsebenzi lula, ukunyaniseka. kodwa, wakuba wenze ubuwena bakho entsimini, uhola imali nje ukusuka imidlalo ukudlala kodwa ekwenzeni iintengiso kunye nezibhengezo. Oku kukhokelela ekubeni udumo ngendlela elungileyo kakhulu.
Le ngasentla aphezulu 8 career iinketho apho basikelelwe imivuzo ezihlawula kunye negama ngexesha elifanayo. kunjalo, umsebenzi omninzi nzima, Ukuzinikela kunye ulandela indlela elungileyo kufuneka.
« Australia ngosuku Happy 2018 iminqweno, Quotes, i-SMS, imiyalezo, images, zedrama
Ileta eya kumhleli ngeengxaki ukungena kwamanzi ngexesha zemvula »